Nwere Philly nwere anyịnya igwe Citi? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Citi bike philly - ọhụrụ agbanwe agbanwe
Citi bike philly - ọhụrụ agbanwe agbanwe
Nwere Philly nwere anyịnya igwe Citi?
Otu n'ime ihe ndị kasịigwe kwụ otu ebe- obodo enyi na enyi na mba, Philadelphia bu ulo Indego, odi mfe ijiigwe kwụ otu ebeshare omume na-ekwusi ọtụtụ narị onwe-ọrụ ụgbọ gafeeobodo.
Ka anyị chee ya ihu: ị nwere ike ịnweta ọnụ ụzọ. Ma ọ bụ ụgbọ ala kụrụ gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè na New York City na 2000s ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-agbapụ na mgbapụ Site na New York Ma eleghị anya ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu na-enweghị atụ, ọ bụ ihe dị mma maka gị n'ihi na ị gbapụrụ ụgbọala, ọ bụghị Ebe Iji Nwee Ahụhụ Mberede Na-agagharị Taa, New York City na-ahụ ihe mgbawa na-agba agba ịnyịnya ígwè.
Yabụ kedu otu obodo si nweta ụdịrị njem a? ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ogbe ndịda? Site na 2007 rue 2013 Janette Sadik-Khan duuru Ngalaba Transportgbọ njem New York. Enwere m ọrụ maka 6,000 kilomita nke n'okporo ámá, àkwà mmiri 789, ụzọ mgbaàmà 12,000, akara ngosi okporo ámá 1.3, okporo ụzọ okporo ụzọ n'okporo ámá, gụnyere otu n'ime ụzọ ụgbọ okporo ígwè mbụ echedoro na United States, anyị nwetara ya na 9th Avenue n'etiti 23rd Street na 16th Street mere.
Nchọpụta a dị mkpa dịka ọ bụ usoro nchedo ogige oge gboo. Ọ nwere ọtụtụ nrụgide karịa ọdịnala mana nrụnye abụwo arụmụka. Maka na imepụta oghere maka ụzọ ndị echedoro ga-ewepụ oghere ndị na-adọba ụgbọala.
Iwepụ ebe ndị na-adọba ụgbọala abụghị maka ndị obi na-adịghị ike. Onweghikwa uzo esi eme anwansi na nzuzo nke g’eme ka odi mfe. Ma ị ga-arụrịta ụka banyere ihe ị na-achọ ime, nri? Onye ọkwọ ụgbọ ala nke 9th Avenue gara ije 6.
Ọ bụrụ n ’ị na-ele anya maka ụkpụrụ okporo ụzọ, ị ga-ahụ usoro ọzọ. Enwere uzo zuru ebe a na-adọba ụgbọala na blọk nwere aka nri, mana ọ bụrụ na ị tụgharịa aka ekpe, a ga-achụ ebe ndị ahụ na-adọba ụgbọala maka ihe mgbochi, ụgbọ ala ga-echere ebe a n'akụkụ ụzọ igwe kwụ otu ebe, Ihe mgbaàmà dị iche iche maka ụgbọala na ịnyịnya ígwè ga na-ama jijiji iji belata nrụgide dị na nkwụsị. Ihe data ahu gosiri na uzo uzo 9th Avenue wetara uru aku na uba, mmeghari na nchekwa.
bụ grilled ọkụkọ ike
Anyị hụrụ mbelata ihe mberede, ihe dịka 47%. Ahịa ire ere bilitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 49%. Gbọ ala nwere ụzọ ntụgharị pụrụ iche nke mere ka okporo ụzọ na-aga nke ọma.
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè wee nwee ụzọ nke ha, ya mere ọ bụ mmeri maka bọs, ọ bụ mmeri maka ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọ bụ mmeri nye ndị mmadụ na-aga ije. Ọ bụkwa mmeri nye ndị mmadụ na wiil abụọ. Nke ahụ setịpụrụ ntọala maka ihe niile sochiri.
Mgbe obodo ahụ nyochachara data sitere na ọkwọ ụgbọ ala nke 9th Avenue, ọtụtụ kilomita nke okporo ụzọ echedoro New York gbawara. Site na 2018 obodo ahụ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 1,200 nke ụzọ igwe kwụ otu ebe. E chekwara otu narị mmadụ n’ime ha.
Maka na anyị enweghị ike ịnabata ọtụtụ nde mmadụ site na ịpịpụ okporo ụzọ na okporo ụzọ anyị ugboro abụọ. Mepụta n'okporo ámá maka ndị na-eme ka ọ dị mfe ịnya ịnyịnya ígwè, ịga ije na bọs - nke ahụ bụ usoro maka ọdịnihu nke obodo. Obodo ndị ahụ na-etinye ụdị itinye ego na mgbanwe ndị a bụ obodo ga-etolite ma nwee ọganiihu na narị afọ a.
Mana iji dọta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè, obodo chọrọ netwọọdụ nke usoro okirikiri na obere okporo ụzọ. Nwere ike ọ bụghị naanị ịgba sharks n'okporo ámá na voila, na-atụ anya ka ndị mmadụ malite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ ga-abụ a pụrụ ịdabere na usoro na ọ nwere na-mma.
Ọ bụrụ na ị lelee ahụike nke ụzọ igwe kwụ otu ebe na netwọkụ ịnyịnya ígwè anyị, ị ga-ahụ ọtụtụ ụmụ nwanyị na ụmụaka ji igwe kwụ otu ebe; mgbe ị hụrụ ụmụnwaanyị na ụmụaka n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe na ndị ezinụlọ nọ n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe, ị mara na ọ dị mma. Ezinụlọ, n'etiti ndị ọzọ, ga-adaba na otu nwere mmasị ma nwee nchegbu na tebụl a. O sitere na ntuli aka na Oregon.
Mana nkwekọrịta njem na-egosi na otu a na-anọchite anya ikike enweghị ikike maka obodo ndị dị njikere ịkwalite ịgba ịnyịnya, nnukwu ihe na-akpata ọganihu ịgba ọsọ igwe na-agba ọsọ na New York. Ma ọ dịkwa ọnụ ala. Know mara, ụzọ igwe kwụ otu ebe mere 99% nke isi okwu anyị, mana naanị 1% nke mmefu ego.
Echeghị m na e nwere mma ego, ma ọ bụrụ na ị chọrọ iwu a mma obodo i nwere ike na-amalite na-ewu mma igwe kwụ otu ebe ụzọ.
Ego ole ka ọ bụ ịgbazite igwe kwụ otu ebe na Philadelphia?
Mgbazinye igwe kwụ otu eben'imeFiladelfia
Nkasi obi na ngwakọanyịnya igwena $ 25 / ụbọchị ma ọ bụ $ 100 / wk. Ndị nwe ụlọ ahịa na-eme ihe karịrị ọtụtụ maka ndị obodo ahụigwe kwụ otu ebeobodo.
Mgbe coronavirus mechiri ụzọ ọha na eze na gyms, ndị America laghachiri na kpochapụwo atụkwasara obi. Ọrịre igwe kwụ otu ebe na US na Machị jiri ịrị elu 121 rịa elu site n ’Eprel, wee kpochapụ ụlọ ahịa anyịnya igwe n’ofe obodo. Ọ dịghị ebe ọ bụla anyị zutere ọchịchọ ahụ na ọchịchọ ahụ ka na-aga n'ihu, mana ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na-eche nsogbu ụkọ nke igwe kwụ otu ebe na shelf niile ebe a azụ n'ụzọ nke ụlọ nkwakọba ihe a na-ejikarị igwe kwụ otu ebe ma ugbu a ọ nweghị ihe ọ bụla ihe anyị gara na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe abụọ, otu na la na otu na Arizona, iji hụ etu ha si jidesie ike a na-enwetụbeghị ụdị ya na-achọkarị n'oge anyị na-agba ịnyịnya ígwè na ngwaahịa anyị nwere ike ibugara gị igwe kwụ otu ebe n'otu ụbọchị ahụ bụ mehdi onye guzobere steeti na tempearizona ọ na-erekarị ịnyịnya ígwè 30 ruo 40 n'otu ụbọchị mana ugbu a ọ nwere ihe karịrị okpukpu atọ iwu ọ na-enye kwa ụbọchị ruo otu narị na mita iri ise; A na-eme ịnyịnya ígwè na taiwan na china na Jenụwarị na February maka ọnwa ọhụrụ afọ ndị niile na-ere igwe na-emechi n'ezie ma ọ dịkarịa ala izu anọ wee mechie 19 ụlọ ọrụ maka otu ọnwa ọzọ site na February, nke mere tupu ọchịchọ maka ịnyịnya ígwè amalite ịmalite. ke United States ke ufọt ufọt March.
Naanị izu ole na ole ka e mesịrị, e resịrị ọgba tum tum ahụ kpamkpam, ọ bụ ezie na a hụrụ ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe dị ka ụlọ ahịa dị mkpa. Medi ka na-enwe nsogbu na igwe kwụ otu ebe ọhụrụ na mmepụta, oge na-abawanye na ọ bụ ya mere anyị ji ahụ ụkọ igwe kwụ otu ebe na los angeles. Adam mcdermott nwere akụkọ yiri nke ahụ ụlọ ọrụ ya bụ linz na-ehichapu ya igwe kwụ otu ebe na-esote akpa abịa, ọ na-ama na e rere kpamkpam Adam na ya azụmahịa ibe chadkushner malitere na linus anyịnya igwe na 2007. ndị ahịa nwere ike ịzụta ha 50 french n'ike mmụọ nsọ obodo anyịnya igwe online anyị A na-ere ahịa weebụ site na ihe dịka 150 dịka mpaghara ọ bụla anyị na-ere ego wuru na igwe taiwan na-ere n'ụwa niile mana anyị kwụsịrị n'ụlọ nkwakọba ihe dị na ndagwurugwu dị na L.awe, iji nwee mmasị na obere obere, ma ọ bụrụ naanị na anyị nwere ike ịnweta ngwaahịa ndị ọzọ anyị na-eche ihu ugbu a, site na ụlọ ahịa osimiri ya na Venice, ọ bụghị ebe dị anya? Ndị otu Adam na-erekarị igwe kwụ otu ebe maka ndị ahịa na-aga ije, nke pụtara na ha nwere ike ịzụta igwe kwụ otu ebe ma buru ya laa n'ụlọ na ụbọchị ahụ, mana ebe ọ bụ na ọrịa a agbasaghị nke a bụ nhọrọ ruo Febụwarị, nke bụ isi ara anyị, Linus si n'ire 1,200 bilie nkeji otu ọnwa na gburugburu 4,000. ugbu a ọ na-ewe ụlọ ọrụ ahụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ka ha wee mepụta otu igwe kwụ otu ebe iji kwado ihe ụlọ ọrụ abụọ chọrọ iji mepụta ihe anyị mere ngwa ngwa wee gaa usoro izizi wee malite site na nrụpụta anyị na mba ofesi na-ejedebe ọnụ ọgụgụ igwe anyịnya igwe ọ bụla Ndị ahịa ya 300 nwere ike ịre, iji gbochie nnukwu ụlọ ahịa ka ha ghara ịba ụba na usoro nke iwepụ nnweta ụlọ ahịa ole na ole ndị ọzọ site na Linda Spikes, ebe New Jersey gbawara ebe ụlọ nkwakọba ihe anyị ọzọ dị.
ịnyịnya ígwè aka warmers
Ihe onyonyo a jọkarịrị njọ ebe ahụ maka New Jersey na New York yabụ na anyị weghachigharịrị ngwongwo niile na West Coast naanị n'ihi na ọ dị ka ụlọ nkwakọba ihe a ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ, yabụ anyị na-eme ụgbọ mmiri anyị niile site na West Coast, ya dị nnọọ ọnụ karịa ma ọ dịkarịa ala, anyị maara na ụlọ nkwakọba ihe a ga-arụ ọrụ Adam na-arụkwa ọrụ n'ụdị ngwa ahịa ọhụụ Anyị na-ebido igwe elegharị anya nke na-agbadata yabụ na ha adịghịdị adị anyị nọ naanị anyị ka na-ere ha na Presale ma ndia sitere na ihe dika puku abuo na puku ato. Ọ bụ nnukwu mgbanwe. Ọ ghọrọ azụmahịa nke njikwa ngwaahịa na ịnwa ịtọọ ngwaahịa, ebe anyị nwere ike nweta igwe kwụ otu ebe na ndị ahịa, otu anyị nwere ike isi mee ka otu onye ahịa nwee obi ụtọ ma ghara ịhapụ onye ahịa ọzọ mgbe anyị nwere igwe kwụ otu ebe na anyị n'otu ụbọchị ahụ nye mmadụ r ọzọ linus anaghị atụ anya ị nweta ọtụtụ ịnyịnya ígwè ya ndị a ma ama na 2021.
Maka ụlọ ọrụ abụọ a, nnukwu ịrị elu emeela na obodo ebe ndị bi na-ere ahịa igwe kwụ otu ebe n'ụgbọ oloko jupụtara. Portland New York Brooklyn Chicago Los Angeles bụ nnukwu ahịa nke na-enwe mmetụta dị mma nke ukwuu site na iji igwe kwụ otu ebe ma e jiri ya tụnyere ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ bọs, na eleghi anya maka ndị na-agba ụkwụ abụọ nwere ike ibelata. Anyị kwenyere na ọchịchọ a ga-aga n'ihu ruo 2021 ka ọtụtụ ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ígwè na-enyocha obodo ha, nke bụ n'ezie ihe dị mma maka gburugburu ebe obibi, anyị hụrụ n'anya ịhụ nke ahụ na onye maara? ybe onye agha ozo nke ndi ozo ma obu onye mmeri nke ndi France wee banye igwe igwe n’oge oria ojoo a ma rue afo ole na ole anyi ga - ahu onye ozo di n’uwa ozo n’abia.
Ego ole ka ọ na-eri iji gbazite igwe kwụ otu ebe?
Na weebụsaịtị (na ngwa?), You nwere ike ịzụta ihe ịgba ọsọ na-akparaghị ókè maka $ 15 kwa ọnwa, ma ọ bụ zụta otu njem na $ 4 maka ọkara elekere. Ma ọ bụ ị nwere ike ịpịgharịa gaa na iheIndegokiosk ma zụta otu njem ka ị na-aga.Jul 22 2016 Nọvemba
Youtụlela ego ole ọ na-ewe iji gbazite ụgbọ ala? Kedu ụgwọ ndị a? Ma ọ bụ mkpebi dị mma nye gị na ezinụlọ gị? Ndewo, a bụ m Cindy nke sitere n’ezi Ego Ezinaụlọ. Aga m enyere gị aka ịzụ ahịa karịa, ịchekwa ego, ma chekwaa oge ka ị nwee ike ịgbanwe ụwa ọzọ. Yabụ enwere ọtụtụ ụdị RV.
Mgbe ị na-eche banyere RV, ị na-echekarị banyere nwa okorobịa ahụ na-anya onwe ya na injin ya. A na-akpọ ndị a RV. A na-ekezi motọm na klaasị A, B na C.
C bụ ihe a na-ahụkarị na nke ị na-eche. Ọ bụ njedebe nke van. O nwere igbe dị na azụ ma na-agabigharịkarị iji nwee ebe ị ga-ehi ụra ọzọ.
oyi na-agbawa anyịnya igwe
Windị Winnebago a ma ama bụ Class C motorhome, ebe nke a bụ ụdị nke ọtụtụ mmadụ na-eche banyere oge mgbazinye ezumike, nke ahụ bụ ihe anyị ga-elekwasị anya taa. Yabụ kedu ebe ị nwere ike ịgbazite motohome? Ebe kachasị dịkarịsịrị bụ Cruise America. Bụ nnukwu ụlọ ọrụ mba.
Can nwere ike iche banyere ha dị ka U-Haul maka RVs. O nwere ike ịbụ na ọ dị ebe dị gị nso. El Monte RV yiri ha, mana ha kachasị na mpaghara ọdịda anyanwụ ya na mpaghara ole na ole na mpaghara ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ ka m lelee ha n'ihi na ha anọghị m nso na Ohio.
Ma mgbe ahụ ị nwere ike ịlele mgbazinye nke ndị ọgbọ. Ndị a yiri Airbnb ma ọ bụ VRBO, mana maka RVs. N’ebe a, otu onye nwe moto mọzụlụ na-agbazinye ya onye ọzọ.
Naanị ebe nrụọrụ weebụ na-ewepụ iji mee ka nke a dị mfe, ọnụahịa na ụgwọ na-adịgasị iche na onye ọ bụla na-akwụ ụgwọ. Yabụ ego ole ka ị ga-atụ anya? Enwere ọtụtụ ụgwọ metụtara ịgbazite motohome. Otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị bụ ụgwọ agbara na ụgwọ ndị njem bụ ụgwọ nke ịnya ụgbọ RV.
Nke a abụghị mmanụ ụgbọala gị, ọ bụ naanị akwa RV na akwa. Onye ọzọ ị nwere ike ịhụ bụ ojiji generator. Ha na-akwụkarị gị ihe ruru dollar atọ na anọ n'otu awa iji jiri igwe na-enye ọkụ na RV.
Enwere ego ole na ole ndị ọzọ n'ebe ahụ, mana ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị buru ibu ị ga-elezi anya. Ihe ọzọ ị nwere ike iburu n'uche bụ nkwụghachi ụgwọ mmebi na RV ọ bụla ị chọrọ na-enwekarị ihe dịka $ 500-750 iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ịlaghachi RV na enweghị mmebi ị ga-enweta ego ahụ. Ihe ọzọ ị ga-atụle gbasara ego ịgbazite motoho bụ oge nke afọ, nke na-emetụta ọnụahịa.
O juru m anya mgbe m chọpụtara na ọnụahịa nke ịgbazite motohome na ngwụsị izu ezumike oge ezumike nwere ike ịbụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ihe ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ị gbazitere otu motọ ahụ n'oge oyi. Echere m, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji chọpụta ọkọnọ na ọchịchọ, mana gbaa mbọ hụ maka oge ọ bụla n'afọ ịchọrọ ịgbazite RV n'ihi na ọ ga-emetụta ọnụ ahịa ya nke ọma. Ya mere, ka anyị lelee ụfọdụ ihe atụ ụwa n'ezie.
M weere dị ka ihe atụ njem ụbọchị ise mụ na ezinụlọ m na etiti ọnwa Julaị. Ihe mbụ m lere anya bụ Cruise America. Enyochare m ọnọdụ m n'akụkụ m na Ohio ebe a wee biri na ọkọlọtọ C motorhome.
Ọ nwere ike ịnabata mmadụ ise ma yie ezigbo nhọrọ maka ezinụlọ m. Ekpebiri m na agaghị etinye ya kichin set ma ọ bụ onye ngwa iwu. Kitchenlọ kichin dị ka ite na efere na iko na ihe niile ịchọrọ na ngwa nkeonwe dị ka akpa ụra na akwa nhicha ahụ maka mmadụ niile.
Echere m na m ga-esi n'ụlọ kpọta ihe ndị a niile. Lọ oriri na ọ costsụ kitchenụ esi nri otu narị dollar na iri na ngwongwo nkeonwe na-efu $ 60 kwa onye. Yabụ ọ bụrụ n'ịga maka nke a, mgbazinye na-abawanye nke ukwuu.
Cruise America kilomita anaghị agụnye kilomita ọ bụla, yabụ a na-agbakọ kilomita niile na cents 35 kwa mile. Ha na-arịọ gị ka ị tụlee nke a tupu ị mee ntinye akwụkwọ. M lere anya na RV a, ọnụahịa bụ $ 140 n'otu abalị mana ọ bụ ihe ijuanya n'ezie mgbe agbakwunyechara ụgwọ niile, ụtụ isi na njem ga-abụ 1,453.54 gụnyere nkwụnye ego ahụ ozugbo m nwetara ego ahụ laghachiri ọ ga - abụ 953.54 nke bụ nkezi? site na $ 190 otu abalị, yabụ anyị siri na 140 ruo 190 mgbe ụtụ na ụtụ niile gafere.
Ọzọkwa na Cruise America nke na-agụnyeghị iji generator yana dịka m kwuru na a na-agbakọ kilomita ndị ahụ kwa kilomita nke a ga-agbanwe mgbe ị laghachiri. Ugbu a, ilele ihe atụ sitere na saịtị ndị ọgbọ na ibe, agara m maka klaasị yiri C RV. E depụtara ya na $ 189 n'abalị, mana ha tinyere mkpuchi, ụgwọ ọrụ, yana $ 750 maka nchekwa nchekwa iji mee ka ọ bụrụ $ 2014.25, ma ọ bụ mgbe ị nwetara ego nchekwa ahụ ọ bụ $ 1206.25, nke bụ 252 Nke ahụ bụ, 85 kwa abalị, n'ihi ya, ọ malitere site na 189 ruo 252 mgbe ụtụ isi niile gasịrị, nnukwu ọdịiche a gụnyere ọtụtụ kilomita kwa ụbọchị ma ọ gụnyere ụfọdụ iji generator eme ihe ọbụlagodi na anyị agaghị enwe ụgwọ ndị ahụ na nke a.
Nnukwu ọdịiche ọzọ dị na mgbazinye ndị ọgbọ na ibe na CruiseAmerica bụ na mgbazinye nke ọgbọ na-echekwa nke ọma na mpempe akwụkwọ niile na akwa nhicha ahụ na akwa nhicha ahụ na efere na iko na ihe niile ị nwere ike ịchọrọ, yabụ ọ ga-adị maa-abụ karịa? ihe. Agaghị m echekwa ya n'ụlọ ma agaghị m echegbu onwe m gbasara ego ndị ahụ. Ugbu a, echegburu m onwe m banyere iwu akagbuo n'ihi na dị ka nne na ezinụlọ ya na-emehie mgbe niile, nri? Echere m, enwere onye na-arịa ọrịa mgbe niile, ma ọ bụ nwee ike olili, ma ọ bụ chukwu gbochie onye maara ihe nwere ike ime, yabụ enwere m mmasị na ihe ọ ga-efu m ma m kagbuo.
O juru m anya na enweghi Doorsy na RV Share, mgbazinye nke ọgbọ, na ịkagbu iwu ahụ siri ike. You nwere ike ịlele eserese a nke m nwere. Amaara m na ọ bụ ntakịrị ihe iji gbari, ma okwu bụ na Outdoorsy dị ntakịrị karịa mgbanwe RV ebuka na Cruise America nwere ọtụtụ mgbanwe karịa ụlọ ọrụ abụọ na-arụ ọrụ ibe.
Nke a na - enye gị ohere ịkagbu ihe ruru ụbọchị asaa tupu oge nkwụghachi nkwụghachi 100%, maọbụ ọbụlagodi na ị kagburu ya na nkeji oge gara aga ị jiri nkwụnye ego $ 300. Ajuju ndi ozo ndi mmadu nwere bu: Inwere ike ịgbazite RV iji gafee obodo a? Kpamkpam. Ndị mmadụ na-eme ya oge niile, na-anya ọtụtụ puku kilomita na RV ndị akwụ ụgwọ.
Mgbe ọ bụla ị na-eme nke a, gbaa mbọ hụ na ị attentionara ntị na ọnụ ahịa ihe agbara ebe ọ nwere ike ịgbakwunye ma ọ bụrụ na ị na-anya puku kilomita. Yabụ, chọọ ihe nwere ike ịnwe njedebe na-enweghị njedebe ma ọ bụ nwee obere kilomita na ya. Ajụjụ ọzọ nke ọtụtụ mmadụ nwere bụ: ị nwere ike ịnweta RV n'otu steeti wee tufuo ya na nke ọzọ? Kpamkpam.
Just na-akwụkwu ụgwọ maka nnyefe RV ma ọ bụ nnweta n'akụkụ ọzọ na ụlọ ọrụ niile m lere anya nyere otu ụzọ mgbazinye ya mere ndị a bụ ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ onwe ha. Ugbu a, m ga-emechi ya niile ma mee ka ị mara maka izugbe ihe ọ ga-efu iji gbazite RV tupu m mee nke ahụ. Ọ bụrụ na gị na ezinụlọ gị na-atụle ịgbazite RV, biko jiri njikọ ndị a.
Ha bụ njikọ nwere mmekọ. M na-eme ụfọdụ ego ntinye akwụkwọ ahụ na ọ ga-enyere m aka ma ọ bụrụ na ị jiri njikọ m. Daalụ nke ukwuu.
Ya mere, nke a bụ nchịkọta m n'ozuzu m hụrụ n'oge oyi maka Class C RV nke ga-efu gị ebe ọ bụla site na $ 130 ruo $ 150 n'abalị. N'oge ọkọchị, ị ga-atụ anya karịa $ 200 na $ 250 otu abalị mgbe ị gbakwunye ụtụ isi na ụgwọ niile. Chetakwa, nke a anaghị agụnye ụgwọ ụlọikwuu.
Site na ugwo ulo oru nke ihe dika $ 30 rue $ 40 n’abali obula, i gha ahuta ihe ruru $ 300 n’abali obula iji ugwo a. Nke ahụ bụ nnukwu ego. Ndị mmadụ na-ajụkarị onwe ha ajụjụ a: ọ dị ọnụ ala karịa ịnya moto karịa karịa ịnọ na họtel? Dị ka ị pụrụ ịhụ site na ọnụ ọgụgụ ndị a, agaghị m ekwu.
M ga-ekwu ọtụtụ oge ọ ga-abụ otu ihe ahụ ma ọ bụ na ọ ga-abụ ihe dị oke ọnụ karịa ịkwọ ụgbọala RV ọ gwụla ma ị ga-abanye ego ịchekwa ego dịka okenye RV ma ọ bụ ma eleghị anya, ụgbọala na-adọkpụ kama RV. Iji kpọpụta ihe atụ ole na ole, anyị hụrụ n'anya ịnọ n'ogige ntụrụndụ obodo ma ọ bụ n'ogige ntụrụndụ mba. Mylocal State Park I Anyị nwere ike ịgbazite ụlọ maka ihe dị ka $ 100 kwa abalị, ikekwe $ 125 na ụtụ isi na ụgwọ.
Cablọ a nwere ime ụlọ abụọ, ebe ịsa ahụ zuru ezu, na kichin zuru ezu nke na-abịa na ihe niile ịchọrọ, ọ na-efu naanị $ 125 otu abalị mgbe ụgwọ gasịrị. Anyị jiri ya tụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 300 kwa abalị maka RV. Ana m agbazite ụlọ abụọ maka ọnụahịa a na ihe yiri ya mgbe? Anyị gara na Smoky Mountain National Park, anyị gbazitere ụlọ Airbnb dị nso, ọ nwere ime ụlọ anọ, ime ụlọ ịwụ ahụ atọ, mbara ihu nwere echiche ugwu kachasị mma na jacuzzi na mbara ihu ahụ, tebụl ọdọ mmiri nke nwa m nwoke hụrụ n'anya, otu Kitchen na m nwere ike esi nri a Ekele ekele nri abalị? Ọ bụrụ na m chọrọ, nke ahụ dịkwa ihe dị ka $ 250 kwa abalị, ma ọ bụ ikekwe nso $ 300 ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ụtụ isi na ụgwọ, mana ọ bụrụ na m ga-achọ ịnọ n'ụlọ mara mma ma ọ bụ RV? Echere m na m ga-ahọrọ ụlọ mara mma.
Yabụ maka m, echere m na m ga-arapara n'ụlọ mgbazinye ụlọ na ụlọ karịa RVs> Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, biko denye aha ma pịa bọtịnụ 'Dị ka'. Enwere m olileanya ịhụ gị ọzọ!
Ego ole ka anyịnya igwe obodo dị na Filadelfia?
Indego365 ACCESS gaego$ 48 kwa afọ ma ọ bụrụ naanị ndị nwere kaadị ACCESS Pennsylvania.Ahịamgbanwe ga-agụnye $ 2ọnụahịammụba maka ndị ọrụ Indego30 kwa ọnwa, site na $ 15 ruo $ 17 kwa ọnwa. Obere oge maka ndị na-agba ịnyịnya ga-agbadata site na 16 afọ ruo afọ 14.Mar 12 2018
Philadelphia na-agba ịnyịnya ígwè?
Phillybụ aha nke itoolu kacha ọhụrụigwe kwụ otu ebe-enyi na enyiobodo dị na United States site na ebe nrụọrụ weebụ ezigbo ala Zillow. Ogologo na-abịa n'oge NationalIgwe kwụ otu ebeỌnwa, ma tinyeFiladelfian'etiti ndị ọzọigwe kwụ otu ebe-enyi na enyiobodo ndị dị ka Seattle (1), San Francisco (3), na DC (4). Ha dekwara ọtụtụ kilomita echekwaraigwe kwụ otu ebeụzọ ndị dị n'obodo ọ bụla.05.17.2016
Ndi Philly Bikeable?
Ka ọ dị ugbu a Bicycling.com nọ n'ọkwáPhillydị ka # 26 nke ọtụtụigwe kwụ otu ebeobodo ukwu ndị dị na U.S., na-ekwu maka obodo ndị dị warara nke obodo ahụ dị ka isi ihe kpatara ọnọdụ ya dị ala. N'ikpeazụ, n'ezie, Philadelphians welitere nchegbu banyere nchekwa, ọkachasị na-eso otu mmerụ ahụ dị ukwuu na otu ọnwụ na mbubreyo 2017.24.04.2019
Ego ole ka ụgwọ akwụ ụgwọ?
N'otu oge ahụ,Indegona-ehiwe obi umealaọnụahịammụba maka Indego30 kwa ọnwa. Site na Eprel 12th, 2018 gafee ọnwaọnụahịaga-aga $ 17 kwa ọnwa, mmụba $ 2 site na $ 15 ugbu aọnụahịa. Ojijiụgwọnọgide na otu na $ 4 / awa maka njem karịrị otu awa.Mar 12 2018
Ego ole ka anyịnya igwe na-acha anụnụ anụnụ dị na Philly?
Zuru okè maka ndị ọbịa ma ọ bụ ndị njem nleta
Ọ bụ naanị $ 10 maka awa 24Bluebikesnweta ma gunyere njem awa 2 na-akparaghị ókè. Ọ bụrụ na ị debe aigwe kwụ otu ebesi ogologo oge karịa awa 2 n’otu oge, ọ bụ ụma $ 2.50 kwa nkeji 30 ọzọ.
Ego ole bụ Citi Bike kwa awa?
A Single Ride is just $ 3.50 and includes the first 30 minutes of one ride on a kpochapụwoCiti igwe kwụ otu ebe. Mgbe ị kwalite njem gị na ebike, ọ ga-abụ ụma $ 0.18 / min. Ọ bụrụ na ị debe aigwe kwụ otu ebepụọ ogologo oge karịa 30 nkeji n'otu oge, n'agbanyeghị ụdị ya, ọ bụ $ 0,18makaNkeji.
Philly bụ ezigbo obodo igwe kwụ otu ebe?
Cygba ígwèn'imeFiladelfiabụukwuụzọ inyochaobodoọtụtụ ụzọ egwuregwu mara mma na ogige ntụrụndụ, ebe ha na-ejekwa ozi dị ka ụzọ mmekọrịta gburugburu ebe obibi si agagharị site n'otu agbataobi gaa na mpaghara ọzọ maka nchịkọta na-abawanye ụba nke echedoroigwe kwụ otu ebeụzọ.01.07.2020
Onye bụ onye nwe Citi Bike New York?
Citi Bike bụ usoro nkekọrịta igwe kwụ otu ebe nke na-eje ozi na New York City na Jersey City, New Jersey. Akpọrọ ya mgbe onye na-akwado nkwado Citigroup, ọ bụ Motivate (nke a na-akpọbu Alta Bicycle Share), na onye bụbu onye isi ụgbọ njem Metropolitan Transportation Jay Walder na-arụ ọrụ ya.
Ebee ka ụlọ ọrụ Citi Bike dị na NYC?
Citi Bike bụ mmemme nnukwu ịnyịnya ígwè kachasị na mba ahụ, yana igwe kwụ otu puku na 14,500 yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 900 ọdụ gafee Manhattan, Brooklyn, Queens na Jersey City. Emere ya maka njem ngwa ngwa na nkasi obi, ma ọ bụ ụzọ na-atọ ụtọ ma dịkwa ọnụ ala iji banye obodo. Chọta igwe kwụ otu ebe dị nso, ma nweta koodu ịgba ịnyịnya ma ọ bụ jiri igodo ndị otu ị kpọghee ya.
Ọ nwere ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na Philadelphia?
Betzọ gị kachasị mma: Lelee ọnlaịnụ ma ọ bụ kpọọ n'ihu. Otu n'ime obodo kachasị nwee mmasị igwe igwe na obodo, Philadelphia bụ ebe obibi Indego, usoro mmemme igwe kwụ otu ebe na-adị mfe iji mee ihe nke na-echekwa ọtụtụ narị ọdụ ụgbọelu nke onwe ha n'ofe obodo ahụ.